Ireo loharanom-baovao momba ny Semalta Ny karazana hosoka amin'ny aterineto sy ny fomba hanalavirana azy ireo
Ny Internet dia loharano lehibe ho an'ny rehetra. Maro ireo mpandraharaha no mandray nyE-varotra e-commerce ho toy ny fomba fivarotana vaovao. Ao amin'ny tranonkala, misy vintana tsy voafetra ary mety ho an'ny fanombohana rehetra. Misy orinasa lehibenanangana izany fahafahana izany ary nanao tranonkala maro. Ny teknikam-pamokarana toy ny Search Engine Optimization dia manampy ny fanombohana fanombohana an-tseraseraary manaova endrika. Ny olona sy ny orinasa dia afaka mahatsapa tombony mahasoa avy amin'ny olona an-tapitrisany amin'ny aterineto - fotografias profesionales.
Na izany aza, satria mieritreritra ny mamorona tranonkala ireo olon-dratsy, toy ny mpanao heloka bevava toy ny hackersIreo scammers dia manatanteraka karazana hosoka amin'ny aterineto isan-karazany. Vokatr'izany dia mila mitandrina amin'ireo karazana heloka bevava ireo ny tsirairay. Afaka manaisotra izy ireomiaraka amin'izy ireo vola be dia be, ary manao fanolanana tsy ara-dalàna amin'ny aterineto hafa.
Andrew Dyhan, manam-pahaizana avy amin'ny Semalt Digital Services, dia nampifanaraka ireo karazana hosoka amin'ny aterineto izay afaka miatrika anao sy ireo fomba izay azonao ampiasaina mba hisorohana azy ireo.
1. Sarin'ny carte de crédit
Maro amin'ireo mpanakorontana no mikendry vohikala ara-barotra sy tranokala hafa amin'ny aterineto amin'ny carte de crédit.Ny fanangonana kara-bola dia afaka manome hackers hahazoan-dolara an-tapitrisa dolara. Ankoatr'izany dia mivarotra kara-panajariana an-tserasera amin'ny aterineto mainty izy ireotsena toy ny Outlaw. Zava-dehibe ny mitandrina momba ny fomba hacking toy ny SQL Injection ary koa ireo fomba hafa izay mampihomehy nyfiarovana amin'ny fifanakalozan-kevitra amin'ny aterineto.Ankoatra izany, ilaina ny manavaka ny mpanjifa amin'ny fomba ampiasain'ireo mpanao heloka bevava ireo amin'ny fangalarana karatraary mitazam-potsiny ny kara-panondrony. Ankoatra izany, mametra ny fampahalalana momba ny karatra fotsiny amin'ny tranonkala azo itokisana.
2. Scams ary mailaka
Ny mailaka dia manome fahazoan-dalana azo antoka ho an'ny mpanohitra hahatratra ny tanjony. Amin'ny hafaIreo tranga ireo dia afaka manatanteraka tsirinteny marobe izay mamela ireo mpitsikilo hametraka olona an'arivony dolara an-tserasera. Tokony hesorina amin'ny mailaka ianaoavy amin'ny loharano tsy voamarina. Amin'ny toe-javatra hafa, afaka mampiasa siramamy spam avo sasan-tserasera ianao ao amin'ny sasany amin'ireo rafitra mailaka azo antoka. Fitsipika tsotra toy izanydia afaka miaro ny business e-commerce amin'ny vokatry ny hosoka amin'ny aterineto sy ireo karazana fanafihana hafa. Tokony hitazona ny tranokalanao malalaka amin'ireoary koa karazana fanafihana hafa.
Ity karazana hosoka amin'ny aterineto ity dia miteraka fihenam-bidy mba hanomezana vaovao momba nypejy sandoka. Ny ankamaroan'ny fanafihana amin'ny spam dia ahitana pejy raki-peo sy karazana raki-pototra hafa. Amin'ny tranga hafa,Ireo mpitsikilo dia afaka mametraka ireo gadona misy ny trozona amin'ny mailaka. Ireo virosy ireo dia afaka mitondra vokatra maro eo amin'ny solosaina toy ny browserny fanapahana. Azony ampiasaina ihany koa ny teknikan'ny phishing mba hitarihana ny olona amin'ny takelaka sandoka, izay afaka mangalatra fampahalalana momba ny karatry ny heloka avy amin'ny heloka hafa.
Misy karazan'olona isan-karazany ao anaty aterineto. Satria ny olona dia manao karazana tombontsoa rehetrafanombohana an-tserasera, olona hafa manana fikasana ratsy dia manamboatra fomba fanatanterahana ny helony. Ohatra, ny olona dia mitazona ny fahafahany manampyNy hafa manana tranonkala ara-barotra. Amin'ny lafiny iray, ireo hackers dia afaka manaisotra sy manaisotra ny vola amin'ny mpanjifa ary ny famoahana ilay tranonkala. izanympitarika dia afaka manampy anao hisoroka ny hosoka amin'ny aterineto izay mety hiatrika anao toy ny fanadiovana vola. Ny fiarovana ny tranokalanao sy ny an'ny mpanjifanaomandainga eo an-tananao.